Campaign တွေမပါလာတဲ့ COD – REDPlayer
Call of Duty ကိုအစောပိုင်း ဂိမ်းတွေကတည်းက အများစုကတော့ ဆော့ဖြစ်ခဲ့မယ်ထင်ပါတယ်။ internet မရတဲ့ အချိန်တွေမှာ single player campaign တွေဆော့ဖြစ်ကြပါလိမ့်မယ်။ story mode ထဲက Price, Soup တို့ကို ရင်းနှီးခဲ့ပါလိမ့်မယ်။
ဒါပေမယ့်အခုတော့ ထုံးတမ်းအစဉ်အလာတွေကနေခွဲထွက်လာမယ့် Call of Duty: Black Ops4လို့ပဲဆိုရမှာပေါ့၊ Pre-order မှာလို့ရနေပြီဖြစ်တဲ့ ဒီဂိမ်းမှာ အရင်လို traditional player campaign တွေပါလာတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီနေ့ပဲ game informer ရဲ့ youtube မှာတင်ထားတဲ့ video အရ Treyarch နဲ့ပြောဖြစ်တဲ့ထဲက ဘာလို့မပါလာလဲဆိုတဲ့ ကိစ္စတစ်ချို့ကို သိရပါလိမ့်မယ်။
တိုးတက်မှုတွေဆိုတာ ခရီးတစ်ခုသွားနေသလိုပါပဲ လို့ပြောခဲ့တဲ့ Treyarch studio ရဲ့ဦးဆောင်သူတစ်ဦးဖြစ်သူ Dan Bunting ကပြောပါတယ်။ သူတို့ အများကြီးစမ်းသပ်ခဲ့တယ် တိုးတက်အောင်တီထွင်ကြည့်တယ်။ တစ်ခုပြီးတစ်ခုတော့ စမ်းသပ်နေရမှာပါပဲ။ တစ်ခါတစ်လေလည်း အလုပ်ဖြစ်သွားတာရှိသလိုတစ်ခါတစ်လေလည်း လစ်သွားတာတွေရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အားလုံးအတွက် ကတော့ အသစ်ဖြစ်ဖို့နဲ့ ပျော်ရွှင်နေဖို့ကိုပဲ အာရုံစိုက်ထားကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။
Black Ops4မှာ Blackout လို့ခေါ်တဲ့ battleroyale mode တစ်ခုပါလာပါတယ်။ ဒီ battleroyale mode က လက်ရှိပြင်ဆင်ဆဲ အချိန်မှာ သိသိသာသာအပြောင်းအလဲတွေ အများကြီးလုပ်တာကို တစ်ခြား studio တွေနဲ့ gamer တွေကသတိထားမိကြပါတယ်။ ဒါကိုတော့ development ကာလမှာ ပြောင်းတယ် ပြုပြင်တယ်ဆိုတာက ပုံမှန်ပဲလေ လို့တုန့်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
Black Ops4ကို စတင်ကတည်းက multiplayer အဖြစ်ပဲ studio ကနေစတင်ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ အရင်လို campaign အဖြစ်မြင်ဖို့ထက် social experience အဖြစ်ပိုမိုဇောင်းပေးထားကြောင်းလည်းပြောခဲ့ပါတယ်။
COD Blackout specialist
ဒီ interview ထဲမှာ သူတို့စမ်းသပ်ကာလမှာပဲ campaign ကိုဖြုတ်ချပြီး battleroyale mode ကိုချက်ချင်းကူးပြောင်းသွားတဲ့အပေါ် မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။. ဒါကိုတော့ လိမ္မာပါးနပ်စွာပဲ Treyarch အနေနဲ့ လက်ရှိ game လောကမှာဖြစ်နေတဲ့ trend အပေါ် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ဖို့ အားထုတ်တယ်လို့ပဲပြောသွားပါတယ်။
“ကိုယ့် fan တွေဘာလိုချင်လည်းပေါ်မူတည်ပြီး အကောင်းဆုံးနဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေကို အချိန်နဲ့ တစ်ပြေးညီပေးနိုင်ဖို့က game လောကမှာ တကယ်အများကြီးလိုအပ်ပါတယ်။ “Dan Bunting (co-head of Treyarch Studio)
အရင်လို ပဲမှန် campaign တွေမပါတော့ဘူးဆိုပေမယ့် ဂိမ်းထဲက ဇာတ်လမ်း နဲ့ စကားပြောတွေကိုတော့ တစ်ခြားပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ပါလာနိုင်ပါတယ်လို့တော့ ပြောထားပါတယ်။
နှစ်စပိုင်းတုန်းက COD ရဲ့ Vice President နဲ့ GM ဖြစ်သူ Kostich ပြောခဲ့သလိုပဲ အရင်လို campaign တွေမပါပေမယ့် ပုံစံအသစ်တွေအများကြီးပါလာတဲ့ Black Ops4ကို ဂိမ်းအစကနေ အဆုံးအထိ အားလုံးကြိုက်ကြပါလိမ့်မယ် လို့ဆိုခဲ့ပေမယ့် ping ကြောက်နေရတဲ့ ကျွန်တော်တို့အတွက်တော့ အိပ်မက်လှလှ မက်နိုင်ဖို့တော့ လိုနိုင်ပါသေးတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် October 12 ရက်မှာ console တွေအတွက်ရော PC အတွက်ပါထွက်တော့မှာဆိုတော့ စောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့။ လောလောဆယ်တော့ Blackout ကို PS4 မှာ beta စမ်းလို့ရနိုင်ပါတယ်။
Call of Duty ကိုအစောပိုငျး ဂိမျးတှကေတညျးက အမြားစုကတော့ ဆော့ဖွဈခဲ့မယျထငျပါတယျ။ internet မရတဲ့ အခြိနျတှမှော single player campaign တှဆေော့ဖွဈကွပါလိမျ့မယျ။ story mode ထဲက Price, Soup တို့ကို ရငျးနှီးခဲ့ပါလိမျ့မယျ။
ဒါပမေယျ့အခုတော့ ထုံးတမျးအစဉျအလာတှကေနခှေဲထှကျလာမယျ့ Call of Duty: Black Ops4လို့ပဲဆိုရမှာပေါ့၊ Pre-order မှာလို့ရနပွေီဖွဈတဲ့ ဒီဂိမျးမှာ အရငျလို traditional player campaign တှပေါလာတော့မှာ မဟုတျပါဘူး။ ဒီနပေဲ့ game informer ရဲ့ youtube မှာတငျထားတဲ့ video အရ Treyarch နဲ့ပွောဖွဈတဲ့ထဲက ဘာလို့မပါလာလဲဆိုတဲ့ ကိစ်စတဈခြို့ကို သိရပါလိမျ့မယျ။
တိုးတကျမှုတှဆေိုတာ ခရီးတဈခုသှားနသေလိုပါပဲ လို့ပွောခဲ့တဲ့ Treyarch studio ရဲ့ဦးဆောငျသူတဈဦးဖွဈသူ Dan Bunting ကပွောပါတယျ။ သူတို့ အမြားကွီးစမျးသပျခဲ့တယျ တိုးတကျအောငျတီထှငျကွညျ့တယျ။ တဈခုပွီးတဈခုတော့ စမျးသပျနရေမှာပါပဲ။ တဈခါတဈလလေညျး အလုပျဖွဈသှားတာရှိသလိုတဈခါတဈလလေညျး လဈသှားတာတှရှေိပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အားလုံးအတှကျ ကတော့ အသဈဖွဈဖို့နဲ့ ပြျောရှငျနဖေို့ကိုပဲ အာရုံစိုကျထားကွောငျးပွောခဲ့ပါတယျ။
Black Ops4မှာ Blackout လို့ချေါတဲ့ battleroyale mode တဈခုပါလာပါတယျ။ ဒီ battleroyale mode က လကျရှိပွငျဆငျဆဲ အခြိနျမှာ သိသိသာသာအပွောငျးအလဲတှေ အမြားကွီးလုပျတာကို တဈခွား studio တှနေဲ့ gamer တှကေသတိထားမိကွပါတယျ။ ဒါကိုတော့ development ကာလမှာ ပွောငျးတယျ ပွုပွငျတယျဆိုတာက ပုံမှနျပဲလေ လို့တုနျ့ပွနျခဲ့ပါတယျ။
Black Ops4ကို စတငျကတညျးက multiplayer အဖွဈပဲ studio ကနစေတငျဖနျတီးခဲ့တာဖွဈပွီးတော့ အရငျလို campaign အဖွဈမွငျဖို့ထကျ social experience အဖွဈပိုမိုဇောငျးပေးထားကွောငျးလညျးပွောခဲ့ပါတယျ။
ဒီ interview ထဲမှာ သူတို့စမျးသပျကာလမှာပဲ campaign ကိုဖွုတျခပြွီး battleroyale mode ကိုခကျြခငျြးကူးပွောငျးသှားတဲ့အပျေါ မေးခှနျးထုတျခဲ့ပါတယျ။. ဒါကိုတော့ လိမ်မာပါးနပျစှာပဲ Treyarch အနနေဲ့ လကျရှိ game လောကမှာဖွဈနတေဲ့ trend အပျေါ လိုကျလြောညီထှဖွေဈဖို့ အားထုတျတယျလို့ပဲပွောသှားပါတယျ။
“ကိုယျ့ fan တှဘောလိုခငျြလညျးပျေါမူတညျပွီး အကောငျးဆုံးနဲ့ စိတျလှုပျရှားစရာတှကေို အခြိနျနဲ့ တဈပွေးညီပေးနိုငျဖို့က game လောကမှာ တကယျအမြားကွီးလိုအပျပါတယျ။ “Dan Bunting (co-head of Treyarch Studio)
အရငျလို ပဲမှနျ campaign တှမေပါတော့ဘူးဆိုပမေယျ့ ဂိမျးထဲက ဇာတျလမျး နဲ့ စကားပွောတှကေိုတော့ တဈခွားပုံစံတဈမြိုးနဲ့ပါလာနိုငျပါတယျလို့တော့ ပွောထားပါတယျ။
နှဈစပိုငျးတုနျးက COD ရဲ့ Vice President နဲ့ GM ဖွဈသူ Kostich ပွောခဲ့သလိုပဲ အရငျလို campaign တှမေပါပမေယျ့ ပုံစံအသဈတှအေမြားကွီးပါလာတဲ့ Black Ops4ကို ဂိမျးအစကနေ အဆုံးအထိ အားလုံးကွိုကျကွပါလိမျ့မယျ လို့ဆိုခဲ့ပမေယျ့ ping ကွောကျနရေတဲ့ ကြှနျတျောတို့အတှကျတော့ အိပျမကျလှလှ မကျနိုငျဖို့တော့ လိုနိုငျပါသေးတယျ။
ဘာပဲဖွဈဖွဈ October 12 ရကျမှာ console တှအေတှကျရော PC အတှကျပါထှကျတော့မှာဆိုတော့ စောငျ့ကွညျ့ကွတာပေါ့။ လောလောဆယျတော့ Blackout ကို PS4 မှာ beta စမျးလို့ရနိုငျပါတယျ။
Tags battle-royale COD FPS